अधिकाँश पुरुषलाई महिलाको बारेमा त्यति नै थाहा हुन्छ जति उनीहरुले देख्छन् र सुन्छन् । खासमा धेरै पुरुषलाई महिलाका रहस्यबारे जानकारी नै हुँदैन । त्यसैले होला एक साहित्यकारले महिलालाई ‘फरेन ल्याण्ड’ अर्थत विदेशी भूमिको सज्ञा दिएका छन् ।
५ .एक्लै हुँदा ….
बिहान उठ्ने वित्तिकै खाली पेटमा चिया पिउने गर्नु भएको छ ? होस् गर्नुहोस